सरकारलाई लाग्यो ज्यानमाराको आरोप – Aarthik Dainik
२०७७, फागुन १९, बुधबार
गृहपृष्ठ ∕ सम्पादकीय ∕ सरकारलाई लाग्यो ज्यानमाराको आरोप
सरकारलाई लाग्यो ज्यानमाराको आरोप
आर्थिक दैनिक पुस १५, २०७७ १०:३८
गएको मंसिरदेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेका उखु किसानको समूहबाट एउटा सम्झौता भएको भोलिपल्ट बिहानै एक जना किसान सधैँका लागि बिदा भए । यो १४ पुस काठमाडौँको कुरा हो । आफूले उत्पादन गरेको उखु बेचेबापतको रकम असुल गरिदिन बितेका १६ दिनसम्मको आन्दोलनमा सहभागी एक ६५ वर्षीय उखु किसानको हृदयघातका कारण निधन भयो । उनी सर्लाही धनकौल छोटवल टोलका नारायण राय यादव हुन् । यसको अघिल्लो दिन आन्दोलनरत उखु किसानहरू तत्काल चिनी उद्योगबाट आफ्नो बक्यौता रकम लिनेसम्बन्धी अस्पष्ट सम्झौता गरी घर फर्किएका भन्ने समाचार छापाहरूमा आइरहँदा त्यसमा थपियो नारायण राय यादवको मृत्युको यो समाचार ।
अघिल्लो दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र आन्दोलनरत उखु किसान संघर्ष समितिका बीच चारबुँदे सहमति भएको थियो । त्यसमा उनीहरूको बक्यौता रकम चिनी उद्योगबाट तत्काल उठ्ने सम्भावना न्यून देखिएको भन्ने विवरण छापिएका थिए । त्यसमा सरकारले किसानलार्ई झुक्याएका भन्ने विवरणहरू पनि थिए । जसको चोट सहन नसकेर यी किसानको ज्यान गयो । उनी मंसिर २८ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेका थिए । हृदयघातबाट मृत्यु भएका यादवले अन्नपूर्ण चिनी मिलसँग २४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ पाउन बाँकी थियो । तर सरकारको यस्तो जाली सम्झौताका कारण सहन नसकेर उनको जीवन नै समाप्त भएको हो । सरकार किसानको पक्षमा भइदिएको थियो भने कम्तीमा ज्यानै जाने अवस्था आउने थिएन कि ?
यसको अघिल्लो दिन आन्दोलनकारी किसान र मन्त्रालयबीच भएको सहमतिको १ नम्बर बुँदामा चिनी उद्योगीले उखु किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम सम्बन्धित उद्योगहरूबाट सहमति भएको मितिले २१ दिनभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । यसैको छेउको सहमतिपत्रको अर्को बुँदा नम्बर २.२ (क) मा बक्यौता भुक्तानी हुनुपर्ने रकमउपर उद्योगी र उखु किसानको दाबी फरक–फरक भएको हुँदा यस सम्बन्धमा यथार्थ एकीन गरी भुक्तानीका सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न प्राविधिक समितिलाई कार्यादेश दिइयो ।
यो प्राविधिक समितिको कार्यकाल भने एक सय १० दिनको हुने उल्लेख गरिएको छ । जसले किसान सोझै ठगिएको बुझाउँछ । त्यसको उदाहरण हुन् यिनै मृतक यादव । उनलाई उक्त परिमाणको उखु उत्पादन गर्न बैंकको १८ लाख रुपैयाँ ऋण लागेका थियो । त्यसैकारण पनि पैसा नलिई आन्दोलन नत्याग्ने बताउँदै आएका यादव सोमबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको बार्ता र सहमतिमा सहभागी नै भएनन् ।
यता २१ दिनभित्र उपलबध गराउने व्यवस्था गरियो र उता प्राविधिक समितिलाई एक सय १० दिनको समय दिइयो । त्यसकारण यो सम्झौता आफैँ ठगी कार्य थियो । त्यसले अति मर्कामा परेका किसानलाई यस्तो रूपमा आहत पा¥यो, जसका कारण ज्यानै गयो । जब प्राविधिक समितिले नै एक सय २० दिन लगाउँछ भने सहमति भएको २१ दिनमा किसानहरूले चिनी उद्योगीसँग कसरी बक्यौता रकम पाउँथे ? यो प्रश्नको उत्तर सरकारले दिन नै चाहेन । यही निरुत्तरित प्रश्नले किसानको ज्यान लिने काम गरेको हो । समाचार विवरणले पुष्टि पनि गर्छन् । सरकारले यी किसानलाई जसरी पनि राजधानीबाट हटाउने मात्र रणनीति बनाएको कारणले यस्ता दुःखद घटनाको सिकार सामान्य किसान हुनपुगेका छन् ।
प्रोग्रेसिभ फाइनान्स २६औँ वर्षमा प्रवेश
नबिल बैंकद्वारा बचतको बानी बसाल्ने भिडियो सार्वजनिक
सेञ्चुरी बैंकको नयाँ शाखा बालाजु र गौरीघाटमा
ज्योति लाइफको ६६ करोड रुपैयाँको साधारण सेयर यही फागुन २३ गतेबाट
नेपाल फाइनान्सको चौथो शाखा सैनामैनामा
६१ प्रतिशतले घट्यो अस्ट्रेलियामा चिनियाँ लगानी
संसारमा थपिए छ सय १० नयाँ अर्बपति
नेतृत्वका कारण झन् तनावको खतरा
राजीनामा बाध्यता कि नैतिक मात्रै
राष्ट्रपतिलाई झुक्याउने प्रधानमन्त्री
चर्चामा संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरू
संसद् पुनर्स्थापनापछिको नैतिक धरातल
खोपमा क्रियाशीलता सह्राहनीय
व्यापारघाटाको खाडल नेपालका लागि दीर्घरोग